Thursday, April 14, 2016 Tuesday, April 12, 2016 Muxamed Yaasiin
Su’aal kama taagna in suuq-geynta dijitaalka ahi uu yahay bahal awood badan - iyo hal bahal helluva ah oo is bedbeddela. In kastoo aan dhammaanteen jeclaan lahayn inaan ka fikirno in suuq-geynta dijitaalku asal ahaan isku mid yahay si kasta oo ay tahayba, xaqiiqdi maahan - sababahana waa iska cadahay. Ganacsi ahaan, waxaad dooran kartaa inaad u qoondeyso boqolleyda qaarkood waqtigaaga iyo miisaaniyaddaada noocyada kala duwan ee suuqgeynta dijitaalka ah: warbaahinta bulshada, PPC, dib u habeynta, suuqgeynta fiidiyowga, suuqgeynta emaylka, SEO, hagaajinta qalabka bogga iyo wixii la mid ah.
Weli, waxa xiisaha badan leh in la ilaaliyo ayaa ah sida warshadaha kala duwan ay mudnaanta u siiyaan istiraatiijiyaddooda suuq-geynta dijitaalka ah. Sababtoo ah warshadaha kaladuwan waxay si cad u lahaan doonaan himilooyin ganacsi oo aad u kala duwan, kaliya qalabka qaarkood iyo dhufto ee ay u badan tahay inay helaan natiijooyinkaas ayaa laga qaadi doonaa Waana mid si gaar ah xiise u leh in la arko sida warshadaha kala duwan ay iskaga soo bandhigaan khadka tooska ah iyo sida ay u heli karaan naftooda macaamiisha iyo rajooyinka.
Intii aan shaqeynayay, waxaan la kulmay dad badan oo suuq geyn ku leh warshado badan oo kala duwan. Intii aan la kulmay, waxaan ka bartay xaddi aad u tiro badan oo ku saabsan xeeladaha suuq-geynta ee ay adeegsadaan si ay u gaaraan himilooyinkooda. Sidii la filaayay, xeelado badan oo la adeegsaday ayaa loo habeeyay dhinaca warshadahaas gaarka ah - iyo haa, way guuleysteen. Haddii aad suuq ka tahay mid ka mid ah 5-ta warshadood ee hoose, waxaad u baahan doontaa inaad akhriska sii wadato. Waa kuwan 3 talooyin suuqgeyn dijitaal ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay 3 warshadaha gaarka ah:
Gacmaha hoos, mid ka mid ah warshadaha ugu khiyaanooyinka badan suuqgeynta waa warshadaha caafimaadka. Sababta koowaad ee tan ugu weyn ayaa ah inaadan sameyn karin sheegashooyin geesinimo leh sida "daaweyntan gaarka ah ayaa kaa daaweyn doonta cudurkaaga." Xaaladaha badankood, waxaad sheegi kartaa oo keliya caddeyn muujineysa in tani ay caawisay tiro dad ah (Ex: "daaweyntan ayaa 98% wax ku ool ah"), ama inay caawin karto. Sida iska cad, tani waa arrin 100% sharci ah.
Hase yeeshe, xitaa iyada oo la xakameynayo la-soo-saarista farriin sharci ah oo la ansixiyay, isbitaalada, rugaha caafimaadka iyo xarumaha kale ee caafimaad ayaa wali haysta fursad weyn (iyo dabacsanaan ku filan) oo runtii "wax loogu dhimayo alaabtooda." Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee tan looga samayn karo warshadaha caafimaadka ayaa ah in la bini aadminimo lagu sameeyo abaabulkaaga oo lagu muujiyo daryeel. Daryeelka caafimaadku waa arrin aad u culus; markaa maxaa diidaya inaad masaafada dheer u gudubto si aad u muujiso in macaamiishaadu (ama bukaanku, halkii) ay dantaada ugu fiican yihiin.
In kasta oo ururkaagu hubaal yahay inuu muujiyo qiimayadan bini-aadamnimada ee ku baahsan boggooda internetka iyo dammaanadda kale ee suuqgeynta, warbaahinta bulshada ayaa ah hab aad u fudud oo si joogto ah loogu helo farriimahaas daryeelista bukaanada cusub iyo kuwa hadda jira Iyada oo ay weheliyaan ogeysiisyada maamulka ee caadiga ah (Ex: Xafiiskan waxaa loo xidhi doonaa dhismaha. Ama Dr. si aad caafimaad ugu ahaato dhacdo maxalli ah (Ex: Ku sameynta xulashooyin caafimaad Carwada Gobolka). Xitaa wadaagista sawirro dabeecad wanaagsan ayaa bukaanleyda ka dhigi kara kuwo aad ugu raaxeysan kara astaamahaaga - sida sawirka Saraakiisha Booliska oo deeqaha ugu deeqaya shaqaalaha kalkaalinta inta lagu jiro fasaxa weyn ee BIG. Waa waxyaabaha yaryar ee ka duwanaan doona ururkaaga inta kale. Raaxo waa dareenka # 1 ee ay bukaanku rabaan inay dareemaan markay raadinayaan dhakhtar daryeel caafimaad aasaasi ah ama go'aan ka gaadhayaan halka ay ka fulinayaan qalliinka.
Sida warshadaha caafimaadka, warshadaha baabuurtu aad ayey u tartamaan… laga yaabee inay xitaa ka tartan badan yihiin. Dadku hubaal waxay doorbidaan waxa cosbitaalada iyo rugaha caafimaad ee ay rabaan inay tagaan, laakiin marka riixitaanka la yimaado, haddii aad qabto xaalad degdeg ah, waxaad aadi doontaa isbitaalka kuugu dhow marka hore. Isbitaaladu caadi ahaan way sii furnaan doonaan - laakiin qaarkood ayaa wax ka sii fiicnaan doona, oo ka sumcad wanaagsan kuwa kale.
Hase yeeshee, maanta iyo da'da, si kastaba ha noqotee, warshadaha gawaarida ayaa kaliya u fiican sida ay u joogaan internetka. Sababtoo ah baabuurtu waa maalgashi aad u weyn, macaamiisha waxay sameeyaan cilmi baaris badan oo internetka ah sida ugu macquulsan ee bini-aadamnimo ah - oo ay kujirto sahaminta websaydhka alaab-iibiyahaaga kor ilaa hoos. Taasi waxay tiri, haddii aad rabto inaad hubiso in macaamiishaadu ay ku mashquulsan yihiin websaydhkaaga inta lagu jiro safarkooda iibsiga baabuurta, waxaad gabi ahaanba u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid suuqgeynta internetka ee iibinta baabuurtaada; oo alaabadaada iyo dallacsiinta oo dhan ha la casriyeeyo. Dadku wakhti uma haystaan ​​inay ugu yeeraan wax iibintaada oo ay weydiiyaan haddii wax wali la heli karo ama dallacsiintu wali socoto. Haddii wax laga heli karo websaydhkaaga, macaamiisha ayaa filaya inay wax badan ku jiraan. Intaa waxaa sii dheer, macaamiisha waxay rabaan inay awood u yeeshaan inay fahmaan wax kasta oo hadda laga heli karo qolkaaga dhabta ah. Marka macaamiisha ay arkaan gaari ay xiiseynayaan khadka tooska ah, fursadaha waa wanaagsan yihiin oo ku aadi doona xulashooyinka baabuurta ee ugu sarreeya 3; markaa hubi in bartaadu aysan gadaal ka dhicin.
Midka ugu dambeeya, ee la dhihi karo warshadaha ugu dhibka badan ee aan ka hadli doono waa Warshadaha Makhaayada! Sababta aan u leeyahay “tan ugu adag” waxa sabab u ah qadar daryeel ah ayaa loo baahan yahay si loo maareeyo dhammaan dib u eegista internetka, faallooyinka iyo cabashooyinka ka imanaya macaamiisha dhammaan dareenka shucuurta. Oo sidaad ogtahay, sida ugu dhakhsaha badan uguna hufan ee loo xaliyo arrinta makhaayada, ayaa sifiican loogu fiicanyahay sumcadooda internetka iyo khadkaba. Sababta oo ah sida ay u fududahay in jawaab celinta lagu diro internetka, makhaayadaha waa inuu sameeyaa dadaal kasta oo uu kaga jawaabayo faallooyin kasta marka ay suuragal tahay dadnimo - mid togan ama mid taban! Mar labaad, wax yar ayaa loo maraa waddo dheer oo loo rogo qof macaamiil nolosha ah.
Barmaamijyada warbaahinta bulshada sida Facebook ayaa macno ahaan ugu oggolaanaya dadka isticmaala inay si guud u qiimeeyaan ururada, iyo sidoo kale inay ka baxaan dib u eegista. Haddii aad tahay bogga bogga, waxaad heli doontaa ogeysiis degdeg ah marka qof uu ka tago dib u eegista boggaaga. Si looga tago aragti togan iyaga, waxa ugu habboon uguna edebsan in la sameeyo waa in looga jawaabo 24 saacadood gudahood - gaar ahaan haddii ay tahay dib u eegis diidmo ah. Markay macaamiishu ku jiraan kuleylka xilligan, waxay rabaan in waxyaabaha la xalliyo ASAP.
Haddii aad ka jawaabeyso dib u eegis diidmo ah, fiiri sidaad wax u hagaajin karto. Hadday tahay dib-u-eegis togan, waqti ku qaad si aad ugu mahadnaqdo isla muddadaas. Kaliya maahan isticmaalayaashu inay arkaan dib u eegista macaamiishaada, laakiin sidoo kale waxay arkayaan sida aad ula macaamilayso. Iyadoo aan loo eegin haddii dib-u-eegistu ay taban tahay iyo in kale, habka aad naftaada ugu muujiso macmiil macnaheedu waa farqiga u dhexeeya qol buuxsamay oo dad ah oo sugaya miis; iyo macmiil 2dii saacba mar. Xirfad ahaantu waa wax walba! Makhaayadaha ayaa sidoo kale lagu soo dhaweynayaa inay uga jawaabaan macaamiisha bogagga kale ee dib u eegista sida Yelp iyo Urbanspoon.
In kasta oo ay run tahay in dhinacyada kala duwan ee suuq-geynta dijitaalka ay u adeegsan karto ku dhowaad abaabul, noocyada aaladaha suuq-geynta suuq-geynta dijital ah iyo tabaha la adeegsado aad ayey ugu kala duwan yihiin warshadaha. Waxa loo arko inay muhiim u tahay hal warshad ma noqon karto mid muhiimad weyn u leh mid kale. Warshadaha kaladuwan waxay leeyihiin yoolal kaladuwan, sidaa darteedna, habab kala duwan oo loogu suuqgeeyo macaamiisha khadka tooska ah.
Tags: suuq geynta baabuurtamarketing digitalwarshadaha suuqgeynta dhijitaalka ahsuuqgeynta warshadahasuuqgeynta caafimaadkasuuqgeynta makhaayadahaSuuq Goobidwarbaahinta bulshadaMedia Social Suuq
Jul 15, 2016 markay ahayd 4:05 AM
Tani waxay cadeyneysaa in suuq geynta dijitaalka aysan kaliya aheyn mowduuc ciriiri ah laakiin mid balaaran oo dabacsan. Tikniyoolajiyadda suuqgeynta dijitaalka ahi waxay qeexaysaa xaddiga suuqgeynta adduunka. Warshadaha caafimaadka, baabuurta iyo makhaayadaha ayaa wax yar ka ah warshadaha badan ee adduunka hogaamiya. Taasna, waxaan ku qancin karaa in suuq-geynta dijital ahi ay qaadatay heer cusub.